Dalka sidan miyaa lagu daawan karaa - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Dalka sidan miyaa lagu daawan karaa
Somaliya waxay u baahan tahay kacdoon cusub oo aan hore loo arag si dalku u hanto qaranimadiisa iyo dadnimadiisa. Dalka sidan laguma daawan karo. Mar haddii maamul jufeed kasta is cajabisay kuna xiratey dalal shisheeye.
Somalida waxa been loogu sheegaa inay qaateen nidaamka goboleysiga ee FEDERAAL ayadoon loo sheegin waxa uu ka dhigan yahay laakiin jufo kasta u fasiratey sida iyada ku haboon.
Waxay maamul jufeedyada la xirteen dalal is eryanaya oo midba rabo inuu urur diimeedkiisa ka fushado dalka. Taasi waxay toos uga soo horjeeda qaranimada iyo xataa FEDERAALKA bugta ee la sheegay in lagu dhaqmo.
Ilaa hadda ma jirto hogaamiye toos u qaaday talaabo uu wax uga qabanayo nidaamkan fashilmey ee FEDERAAL inuu yiraa waan qaadanay mooyee. Hadaba dalka sidan miyaa lagu daawan karaa.
Inkastoo ciidanku soo xoogeysanayo hadana looma ogola inuu fuliyo sharciga iyo kala dambeynta oo xoog ku qabsado meelo laga diidan yahay dawladnimada.
Waxa hoosta laga soo geliyay dastuur ka baxsan diinta iyo dhaqanka ummada oo asalkiisu ogolaanshaha khaniiska. Ma jirto cid leh waar inaga tuura aan habayno mooyee. Taas oo cunta waqti farabadan oo dadka wax loo qaban lahaa.
Waan ognahay in dadku waxba diidanayn laakiin hogaamiye jufeed ku xiran gaalo iyo Carab oo rabo inuu jihada ka tuuro inta hoos joogta.
Haddii maamul jufeedyadan loo ogolaado inay sidan ku sii socdaan waxaad is weydiin kartaa aaway rajada Somali ka qabto inay yeelato qaran dhisan.
Tan Somalida oo la xalin karo si fudud waxa meesha ku jirta tan caalamiga ah oo aad u xoogeysatay baryahan dambe markii la arkey in dalku iskii lugihiisa isku taagi karo laakiin u baahan in Somaliya yeelato saaxiibado runa oo ka mida dalalka awooda leh.